Ushingi huri mudambudziko rekugadzirisa ma URL uye nekuisa mareferensi maLinks | Kubva kuLinux
Ushingi huri mudambudziko rekushandura ma URL uye nekuisa zvirevo zvekutumira
Mazuva mashoma apfuura Nhau dzakaburitswa dzakaburitsa kunyongana kuzere zvinopesana newebhusaiti shinga iyo mu "dzidziso" yakamisikidzwa seye browser rakasiyana nemamwe, nekuti rinoti "chengetedza zvakavanzika zvevashandisi varo."
Bhurawuza iri pamusoro peiyo Chromium injini, inotarisa pakuchengetedza zvakavanzika zvevashandisi, inosanganisira yakavakirwa-mukati yekushambadzira injini, inogona kumhanya kuburikidza neTor, inopa yakavakirwa-mukati rutsigiro rweHTTPS Kwese, IPFS, uye WebTorrent, uye inopa imwe nzira yekunyorera-yakavakirwa mari nzira yemabhanhire.
Iyo yekupedzisira yakamisikidzwa senge nyowani ecosystem yemubairo yakavakirwa pakucherechedzwa uye inoshandisa yakakosha yekutaridza tokeni (BAT), nzira nyowani yekukoshesa kutarisisa, kubatanidza vashandisi, zvemukati vagadziri nevashambadzi.
Kamwe chete pamwedzi, Kushinga Mibairo inotumira iyo inoenderana huwandu hweBAT, yakakamurwa zvinoenderana nekutarisisa kwako, kubva kuchikwama chemuno chakavakirwa mubrowser kuenda kumasayiti akamboshanyirwa, ichi chiri chimiro chekutsigira kwemari kune avo vese masters webhu.
Parizvino zvese zvinonzwika zvakanaka uye zvakaiswa seyakanakisa pfungwa yekuti hapana imwe browser inopa uye zvinoita sekunge havana hanya nekuzviita.
Asi zvinhu zvachinja uye zvinopesana nezvinotaurwa nebrowserkubvira zvakaburitswa kuti webhu saiti inoita kutsividza kwe "zvirevo zvekutumira" pavanoedza kuvhura mamwe masayiti kuburikidza neheti yenzvimbo dzavo mubara rekero (zvinongedzo zviri pamapeji akavhurika hazvichinje).
Semuenzaniso, iwe paunopinda "binance.com" mune kero bar, iyo Autocomplete system inongowedzera iyo yekuendesa link "binance.com/en?ref = ???" kunzvimbo.
Uye zvakare, inoita hunhu hwakafanana kumatunhu coinbase.com, binance.us, ledger.com uye trezor.io. Zviito zvakadaro zvakaonekwa nevazhinji sekunyepedzera kusiri iko kunokanganisa kuvimba kwevashandisi.
Zvakanaka Nekuita izvi, hauchateedzere chikamu che "kuchengetedza kuvanzika kwevashandisi", Zvakanaka, nekuve nekutonga kweiyo url kutsiva zvinongedzo zvekutumira, zviri pachena kuti maemail evashandisi vazhinji anoratidzwa munzira dzakasiyana dzekuendesa.
Kunze kwekuti vashandisi vazhinji vaidaidza iyo nzira inonyadzisa kwazvo yekuwana mari.
Wakatarisana nedambudziko iri, maneja weprojekiti akatsanangura izvo kuoneka kwekushanda kwakadaro mune cheki-yekupedzisa mashandiro zvakakonzerwa nekutadza.
Dambudziko rinokonzerwa nechikanganiso mukodhi yekuendesa chinongedzo chemumwe wako panguva yekushandura kubva kukero bar yezvikumbiro kune injini dzekutsvaga.
Paunenge uchipinda mazwi akakosha mubhawa rekero, chikumbiro chinotumirwa kune yekutsvaga injini ine chinongedzo - ese mabhurawuza anotora chikamu muzvikwereti zvinotsvaga zvinotsvaga zvinotumira zvakafanana.
Nekuda kwe bug, kupinda kwakananga kweinokurudzirwa shamwari sevhisi dura kwakatungamira kune wehukama ID kubatanidzwa kune iyo dome yacho pachayo.
Asi, izvi hazvina kugonesa vashandisi veChipenzi chero chinhu, sezvo ruzivo rwakaburitswa kuti Brave inonyatso kuverengerwa nehurongwa hwehukama naBinance uye nekumwe kuchinjana kwekrispto, asi kodhi yekuendesa inoshandiswa muwijeti inoratidzwa mune isingabvumirwe ad unit mune iyo nyowani tebhu.
Pakupedzisira, Vanhu vakashinga vakati gadziriso rakadzika kusvika pakuremadza marongero Kudzora kudarika kweBrave kurudziro yekupedzisa otomatiki mubara rekero (kare, marongero anga aripo nekutadza).
Iyo rondedzero yezvinotsiviwa iyo zvinongedzo zvinongedzo zvinoratidzwa zvakasara zvakafanana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Noticias » Ushingi huri mudambudziko rekushandura ma URL uye nekuisa zvirevo zvekutumira
Akashinga, vatakuri vemhando dzekuvanzika… Tumira mazai.
Ini handibvumirane neizvo Brave anoti zvese zvaari kutaura manyepo, iye musiki anofunga seni, anogona kuzvidzivirira pawebhusaiti yake.
Chero ani anoda kuvharidzira chero bhurawuza rinovharidzira shambadziro pawebhusaiti yavo, anondishanyira uye ndinopfuura kodhi, kana ichivagutsa
Shandisa wakashinga kundishanyira uye tinya chero pane iri peji
Vagadziri havagone kubvumira mabhurawuza kutiudza isu kuti ndeapi ma ads ekuisa
Pindura kuna eloipa
Android 11 beta yave kuwanikwa uye inogona kuyedzwa izvozvi